Contract Real Estate Jobs in Myanmar | MyJobs
Contract Real Estate Jobs in Myanmar
Sales Manager (Sub Distribution) - Male Only
Sales Admin Officer - (JLR)
Circuworld (Myanmar) Co. Ltd.
အိမျခွံမွအေကွောငျးနားလညျပွီး စာခြုပျစာတမျး ကိစ်စမြား/ Customerမြား၏ မေးခှနျးမြားကိုဖွကွေားပေးနိုငျရမညျ။ အစိုးရရုံးမြား ဝငျထှကျသှားလာနိုငျရမညျ။
အိမျခွံမွအေကွောငျးနားလညျပွီး စာခြုပျစာတမျး ကိစ်စမြား/ Customerမြား၏ မေးခှနျးမြားကိုဖွကွေားပေးနို ...
BE in any disciplines 5-8 years' experience
BE Mech, 5- 8 years' experience
BE Elect, min. 10 years' experience
Minimum-5years’ experience in Solar PV projects.
Android Developer (M/F-2-Posts)
The Android Developer's Responsibilities include writing and proofreading code, liaising with coworkers within and outside of their department, and monitoring customers' feedback.
The Android Developer's Responsibilities include writing and proofreading code, liaising with co ...
Web Developer (M/F-3 Posts)
ဆော့ဖျဝဲလျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျတီထှငျဆနျးသဈသောအကွံဥာဏျမြားရှိပွီး နညျးပညာအသဈမြားကိုလလေ့ာစူး ...
Sales Admin Executive (Female-2 Posts)
အရောင်းပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြူံရှိပြီး Customer များအားသေချာရှင်းပြပေးနိုင်ရမည်။ Customer service ပိုင်းကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အရောင်းပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြူံရှိပြီး Customer များအားသေချာရှင်းပြပေးနိုင်ရမည်။ Customer service ပ ...
Adminပိုင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာနားလည်ရမည်။မိမိအဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းမွန်စွာ ဦးဆောင်နိုင် ...